27 dagaalyahan oo katirsan Al-Shabaab oo lagu dilay duqeyn uu Mareykanku ka geystay Puntland - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeSomaliaPuntland27 dagaalyahan oo katirsan Al-Shabaab oo lagu dilay duqeyn uu Mareykanku ka geystay Puntland
June 4, 2018 Puntland Mirror Puntland, Somalia 0
Maleeshiyada Al-Shabaab buuraha Galgala. [Sawirka]
Garoowe-(Puntland Mirror) 27 dagaalyahan oo katirsan Al-Shabaab ayaa lagu dilay duqeyn uu Mareykanku ka geystay Puntland, Soomaaliya, Taliska Mareykanka ee Afrika ayaa sidaa bayaan ku sheegay maanta oo Isniin ah.
Duqeynta ayaa Sabtidii ka dhacday meel qiyaastii 26 mayl koonfur-galbeed ka xigta magaalada Boosaaso, sida ay sheegeen Taliska Mareykanka ee Afrika.
August 24, 2018 Doorashada Duqa Garoowe: Maxay yihiin musharixiinta tartamaya?
December 11, 2016 Doorashada xildhibaanada aqalka hoose oo dib uga bilaabmatay Garoowe